TogaHerer: HOGGAAMINTA HABBOON“Rag madaxdu ka halowdaa, waa marrin habaabiye.”- Af-Qallooc
HOGGAAMINTA HABBOON“Rag madaxdu ka halowdaa, waa marrin habaabiye.”- Af-Qallooc
Published on: Oct 7, 2009 18:45
Doorashadda Awoodda Nabadeed: Colaadu ma beerto waxaan ahayn midho xun waayo waxaa lagu abqaalaa nacayb, waxaa na lagu waraabiyaa dhiigga dadka lala dirirayo. Ilbaxnimaduna inama farto ‘si-welba’ yeelka. Taasi lidkeeda oo ah in nabad wax lagu weeleeyaa ka qumman tan hore. Nebiga(NNKH) iyo ciidankiisu markay qabsadeen Maka, waxaa la hor keenay cadowaydii ugu waaweynaa ee uu dhabanka dhulka ka dhigi waayey. Waxay ahaayeen been abuurayaashii dagaalka kulul kula jiray. Nebigu wuxuu ka doortay xikmadodhanaysa ‘ha ka aargoosan , laga yaabaa in beri anfac laga helee.’ Wuu cafiyey, xoriyad buuxdana siiyey. Natiijaday dhashay waxay ahayd arrin mahadho reebtay: in dhamaan ay si deg deg ah u aqbaleen diintii Islaamka.